किन झन् झन् निराश बन्दैछिन् सुन्दरी नायिका रिमा ? (हेर्नुस भिडियो) — Motivate News
किन झन् झन् निराश बन्दैछिन् सुन्दरी नायिका रिमा ? (हेर्नुस भिडियो)
काठमाडौँ – नायिका रिमा विश्वकर्मा पछिल्लो समय चलचित्रसँगसँगै अभिनयमा पनि ब्यस्त छिन् । नेपाल आइडलमा होस्टका रुपमा काम गरेर समेत चर्चामा रहेकी यि सुन्दरीले अभिनय गरेको नयाँ गीत ‘सावन होइनन् मेरा नजर किन त्यसै बर्सिदिन्छन्’ । जिन्दगीमा आउनेहरु किन त्यसै तर्सिदिन्छन् सार्वजनिक भएसँगै उनको चर्चा फेरी एक पटक सुरु भएको हो । जुन गीत कुनै समयको अत्यधिक चर्चित हो । जसलाई पुनः नयाँ साजसज्जाका साथ बजारमा ल्याइएको हो । नागेन्द्र श्रेष्ठको स्वर,अरुण तिवारीको शब्द रचना,टीका भण्डारीको सङ्गीत अनि सन्दीप कार्कीको साउन्ड डिजाइन रहेको यस गीतमा रीमा बिश्वकर्मा र रन्जन रिजालको अभिनय रहेको छ। अमृत सुनुवारको निर्देशन रहेको गीतलाई माधव बेलबासेले गरेका हुन् । गीतले मुख्य रुपमा जीन्दगीमा माया नपाएको एउटा पुरुषको कथालाई नजिकबाट केलाएको छ ।
सावन होइनन् मेरा नजर भन्दै प्रेमीसँग निरास अवस्थामा भेटिइन् नायिका रिमा विश्वकर्मा काठमाडौं । सावन होइनन् मेरा नजर किन त्यसै बर्सिदिन्छन् ! जिन्दगीमा आउनेहरु किन त्यसै तर्सिदिन्छन् ! कुनै समयको अत्याधिक चर्चित यो गीत पुनः नयाँ साजसज्जाका साथ सार्वजनिक भए लगत्तै गीतले राम्रो चर्चा परिचर्चा पाएको छ । हालै मात्र युट्युबमा सार्वजनिक गरिएको गीतमा सुन्दरी नायिका तथा मोडल रिमा विश्वकर्मा र रन्जन रिजालले जीवन्त अभिनय गरेका छन् ।
एउटा पुरुष जसले जिन्दगीमा अरु सबै थोक पायो । पाएन त केवल माया मुख्य सार बोकेको यो गीतले माया गर्ने र जीवनमा धोका पाउनेहरु सबैको कथा बोकेको छ । जसलाई चर्चित गतिकार अरुण तिवारीले शृजना गरेका हुन् । नागेन्द्र श्रेष्ठको स्वर तथा टीका भण्डारीको सङ्गीत अनि सन्दीप कार्कीको साउन्ड डिजाइन रहेको गीतलाई अमृत सुनुवारको निर्देशन गरेका हुन् । जुन गीतले युट्युबमा सार्वजनिक भए लगत्तै राम्रो प्रतिक्रिया बटुलीरहेको छ । गीतको दृश्य सम्पादन माधव बेलबासेले गरेका छन्।